Tohodrano Farihitsara Antsitabe II: ho safo-drano ny trano 3 000 tafo, fiangonana fito, … | NewsMada
Tohodrano Farihitsara Antsitabe II: ho safo-drano ny trano 3 000 tafo, fiangonana fito, …
Manohitra marindrano ny fananganan’ny fitondrana tohodrano any Farihitsara, distrika Antsirabe II, ny mponina, ny fiarahamonim-pirenena, ny fiangonana sy ny hafa. Fandaharanasa hanapotika ny fananan’ny mponina sy ny fivelomany manontolo sady tsy nakana ny hevitr’izy ireo.
Efa nanomboka ny taona 2017 ny fikasan’ny fitondrana, ankehitriny, hanangana tohodrano sady fitahirizan-drano lehibe, afaka mamokatra herinaratra manodidina ny 20 MW any Farihitsara, ao amin’ny distrikan’Antsirabe II, faritra Vakinankaratra. Tsy nakana ny hevitry ny mponina, izay tokony tsy maintsy atao, ity tetikasa ity nefa efa mandeha ny fanadihadiana samihafa any an-toerana amin’ny hanatanterahana azy.
Manohitra marindrano ny fananganana ity tohodrano ity ny mponina any an-toerana ary nanao tatitra fitarainana. Ahitana fokontany dimy ka ao anatin’ny distrika Antsirabe II ny telo (anisany ny any Farihitsara), miampy fokontany roa any amin’ny kaominina Tsarazaza, distrika Fandriana, faritra Amoron’i Mania.
Maherin’ny 3 000 ny trano ho safotry ny rano raha hatao ity tohodrano ity, ny tanimbary (miantoka ny 30%-n’ny famatsiam-bary any Vakinankaratra) sy ny fambolena manontolo (ovy, karaoty, legioma, …). Miisa fito koa ny fiangonana ho difotry ny rano (FLM telo; Ekar roa; FJKM iray; Advantista iray), toeram-pitsaboana CSB iray, sekoly EPP iray, tsy miankina iray. Ho difotry ny rano koa ny lalana mampitohy an’Antsirabe sy i Fandriana, lalam-pirenena taloha, any atsinanan’Isahanivotry.
Tsy mazava ny toe-tsain’ny fitondrana
Anisan’ny nahazo izany fitarainan’ny mponina izany ny fikambanana iraisam-pinoana, ny Birao ifandraisan’ny mpampiofana eo amin’ny tontolon’ny tantsaha (BIMTT), ahitana ny Fiangonana katolika (Ekar), ny protestanta (FJKM), ny loterana (FLM), ny anglikana (EEM).
Raha ny fantatra, hanana halavana 216 m ity tohodrano ity ary 53 m ny haavony. Nilaza ny sekretera jeneraliny, Rajoelisolo Kotondrajaona, taorian’ny fanadihadiana nataon’izy ireo tany an-toerana fa hahatratra 70 m ny haavony. Nomarihiny fa tsy manohitra ny tetikasam-pampandrosoana velively izy ireo. Tsy manome tsiny ny orinasa tsy miankina hanao ny asa, saingy tsy mazava ny toe-tsain’ny fitondrana hamono ny tantsaha toy izao.
Ahina hisy kolikoly
Mahafantatra ity fandaharanasa ity ny lehiben’ny faritra Vakinankaratra, ny jeneraly Rakotonarivo William, nilazany fa any Farihitsara ny toerana mety hanaovana azy. Efa nisy ny fivoariana natao niaraka tamin’ny sefo fokontany sy ny ben’ny Tanàna. Miaiky izy fa tsy maintsy hisy ny toerana ho tototry ny rano. .. Efa misy ny kitapom-bola manokana hanonerana ny fananan’ny mponina.
Ho an’ny mpahay lalàna iray ao amin’ny BIMTT, ahina hisy endrika kolikoly ity tetikasa ity satria tokony tsy maintsy hisy ny antso tolo-bidy amin’ny fanaovana asa goavana ho an’ny vahoaka toy izao.
Tsy misy mazava anefa ireo voalaza ireo. Ao anatin’ny fotoam-pifidianana rahateo eto amin’ny firenena ka sao hisy fanararaotana politika ataon’ny fitondrana, hanerena ny hanaovana azy.